Dibana ne-Sony Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact | I-Androidsis
URafa Rodríguez Ballesteros | | MWC, Sony
Ewe, i Usuku lweSony kwiMWC 2.018. NgoFebruwari 26 kwaphawulwa ixesha elide kwikhalenda yabathandi bakaSony kunye nee-smartphones zabo. Emva kokuba uyazi inyani yoluhlu olufana ne-Samsung Galaxy S9. Iilaptops ezivela eHuawei, kunye nezinye izinto ezintsha. Ithuba likaSony selifikile, Sikuxelela ukuba i-Xperia XZ2 kunye neXperia XZ2 zihambelana njani.
Kwimarike apho uninzi lwabenzi lulandela iintsingiselo, uSony uhlala eyinyani kuye. Ukugxekwa ngabanye nokudunyiswa ngabanye ngenxa yesi sizathu, uSony uhlala enabaphulaphuli. Namhlanje bobabini abalandeli kunye nabanomdla bebelindelwe ziimodeli ezintsha athe uSony wazisa kwi-MWC ye-2.018.
1 Injalo ne-Xperia XZ2 kunye ne-Xperia XZ2
2 Ikhamera engcono, amandla amaninzi kunye nebhetri enkulu
3 Iphepha ledatha leSony Xperia XZ2 kunye neXZ2 Compact
4 I-Xperia XZ2 kwividiyo evela kwi-MWC18
5 I-Xperia XZ2 Compact kwividiyo evela kwi-MWC18
6 Ucinga ntoni entsha evela kwaSony?
Injalo ne-Xperia XZ2 kunye ne-Xperia XZ2
Ekugqibeleni sikwazile ukubona ukubonakaliswa kokubheja kukaSony kwihlabathi le-smartphone. Izixhobo ezimbini ezithi ikhefu kancinci (malunga nexesha) kunye ne-aesthetics efikileyo ndiziva ndiyi-tonic yale nkampani. Siyaqaphela imiphetho kunye neekona kancinci ijikelezwe ngakumbi ezenza ukuba zihambelane ngakumbi neendaba esikwazileyo ukuzibona kwezi ntsuku.
Ukuzibophelela kukaSony kwi i-smartphone enesikrini "esingenasiphelo". Inqaku elitsha leXperia XZ2 kunye neXZ2 5,7 kunye no-5 intshi, ngokulandelelana. Kwaye zombini ezi akhawunti phantse nezakhelo ezingekhoyo. Iinkcukacha ezenza la malungu mabini matsha osapho lakwaSony abonakale emangalisa. Kwaye banayo Isisombululo esipheleleyo seHD kunye nembonakalo yesikrini kwi 18: 9 umlinganiso wezinto.
Enye into enoveli entsha yeXperia XZ yindawo yokufunda iminwe yeminwe. Emva kokubeka kwiqhosha lokuqala, kwaye i "experiment" engaphumelelanga yokubeka kwiqhosha elisecaleni. USony uthathe isigqibo sokubeka umfundi weminwe ngasemva, ngezantsi kwekhamera yezithombe. Indawo ebhetyebhetye ngakumbi kunye ne-ergonomic. Yiyiphi abasebenzisi bakho abaya kuyixabisa.
Enye yamandla eselfowuni kaSony ibisoloko ziikhamera. I-Sony ihlala ifana nomgangatho xa kufikwa kufota. Nangona kunjalo, njengoko besele kwenzekile nolunye uphuhliso kwicandelo, uSony akabheje ngokufanayo nabanye, iikhamera ezimbini. Ikhamera entsha yeXperia XZ2 kunye neXZ2 inekhamera enye yelensi. Kodwa oko akuthethi ukuba baya kuba neekhamera ezikumgangatho osezantsi kunabanye.
Ikhamera engcono, amandla amaninzi kunye nebhetri enkulu
Ii-XZ ezimbini ezintsha ziya kuza zixhotyisiwe Iikhamera ezinesisombululo se-19 megapixel f / 1.8 resolution. Akukho iilensi ezimbini okanye iikhamera ezimbini eziyimfuneko ukubonelela ngekhamera emileyo ekhethekileyo. Iyakwazi ukukrola Ividiyo ye-4K ye-HDR yesisombululo. Kwaye kunye nokusebenzisa okuthandwayo imo "yokuhamba kancinci". Zithini iirekhodi ividiyo kwizakhelo ezingama-960 ngomzuzwana ngesisombululo esigcweleyo seHD. Indawo yokupasa eyiyo.
Ngokubhekisele kwiibhetri, uSony ufune ukunika i-Xperia entsha ukuzimela okukhulu. Malunga ne Xperia XZ2 Compact, Uya kuba nefayile ye- 2.870 mAh ibhetri. Kwaye i-Sony Xperia XZ2 nebhetri 3.180 mah. Sibona ukuba ukwanda komthwalo kunye nokuzimela kwezi zixhobo kukwasebenza ukongeza. Ngethuba lokutshaja ngaphandle kwamacingo kuhlobo olukhulu.
Ukugqiba iqela elithembisayo, ezi nguqulelo zimbini I-Sony Xperia XZ2 iya kunyusa amandla Qualcomm Snapdragon 845. Iprosesa ekwaziyo ukwenza ezi zixhobo zibonelela ngokusebenza okuphezulu kakhulu. Kwaye oko kuyakwenza ukusetyenziswa kwamandla kulawulwe ngakumbi. I-Sony Xperia XZ2 iya kuyinika konke ngezi processor. Kwaye baya kuthi, malunga I-Android 8.0 Oreo, ayinokuba ngenye indlela njani.
Iphepha ledatha leSony Xperia XZ2 kunye neXZ2 Compact
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Sony Xperia XZ2 Compact
Ibhanti Sony Sony
Umzekelo I-XZ2 Compact XZ2
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.0 Oreo I-Android 8.0 Oreo
Isikrini 5 intshi 5.7 intshi
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Ukugcina ngaphakathi I-64 Gb ngenkxaso ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-400 Gb I-64 GB ngenkxaso ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-400 GB
Ikhamera yangaphambili 5 Mpx 5 Mpx
Conectividad I-USB 3.1 Uhlobo C-NFC-iBluetooth I-USB 3.1 Uhlobo C-NFC-iBluetooth
Ezinye iinkalo Umfundi weminwe-SIM ezimbini Umfundi weminwe-SIM ezimbini
Ibhetri 2.870 mah 3.180 mah
Ubukhulu Ubukhulu: 135 x 65 x 12.1 mm Ubukhulu: 153 x 72 x 11.1 mm
U bunzima I-168 gram I-198 gram
Ixabiso 599 euro 799 euro
I-Xperia XZ2 kwividiyo evela kwi-MWC18
I-Xperia XZ2 Compact kwividiyo evela kwi-MWC18
Ucinga ntoni entsha evela kwaSony?
Njengoko sinokubona, uSony akakhange afike kwiindaba. Kule MWC ubeke yonke inyama kwi-grill. Kwaye iphinda iziveze kwakhona ukoyisa imarike eyaya isiba nzima kunye nokubheja okubini okunzulu ukufumana indawo yayo yendalo. Sijongene neetheminali ezimbini ezifanelekileyo ezinokukwazi ukuzilinganisa ngokuchasene nayo nayiphi na imbangi. Ngaba uSony usenayo indawo kwisiphelo esiphakamileyo?
Zombini izixhobo zabelana phantse ngazo zonke iinkcukacha ezichaziweyo. Umahluko kuphela ngokobungakanani, ubukhulu, ibhetri kunye nobunzima. Ewe kunjalo ngexabiso. Kucacile yiya kwii-specs ezinamandla kubukhulu obahlukeneyo. Yenzelwe abo bangazithandiyo izikrini ezihlala zikhula. Nge-XZ2 uya kuba nayo yonke into yakutshanje evela kwaSony, kunye nenguqulelo yeCompact uya kuba nayo kodwa kubungakanani obuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » Dibana ne-Sony Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact